နနွင်းလေးလိမ်းရင် အသားအရေတွက်ကောင်းတယ်တဲ့💖 ကော်ဖီနဲ့ Body Scrub လုပ်ရင် အသားအရေအတွက် အကျိုးပြုတာအရမ်းကောင်းတယ်ဆို💖 မန်ကျည်းသီးရဲ့အနှစ်က အသားအရေစိုပြေစေတယ်တဲ့💖 ‌ အင်းကောင်းတာတွေတော့သိပါရဲ့ အချိန်ပေးရမှာနဲ့ အလုပ်ကလည်း ရှုပ်အုန်းမယ်💁💁 ကဲ စိုးရိမ်မနေပါနဲ့တော့ အဲ့ဒီအတွက်တော့ BS Soap ရှိနေမှတော့ Better Skin လေ😍😍 သူက ကော်ဖီ နနွင်း မန်ကျည်း ဆပ်ပြာလေးဆိုတော့ ဘာပြောကောင်းမလည်း🤗 ကုန်ကျစရိတ်ကလည်းမကြီးဘူးနော်..BS Soap အတုံးကြီး 120g ကိုမှ 4,500Ks ပါ✔️✔️ ရလဒ်လေးကလဲ အံ့ဩလောက်အောင် သိသာစေတယ်💦💦💦 အကြာကြီးလည်း အသုံးခံဆိုတော့ ok ပြီပေါ့နော်👌 ☎️Message chat box or 09454549089 ကို ဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပါတယ်ရှင်
😍စိတ်တိုင်းအကျဆုံးကတော့ မျက်နှာလေးကအမြဲတင်းတင်းလေးနဲ့ Glowနေတာကိုပဲ😘😘 New Skiin ဆိုတာ လုံး၀ makeup မဟုတ်ပါ‼️ ကိုယ့်အသားအရေကို ♦️Boost♦️ လုပ်ပေးတဲ့ Skin care အမျိုးအစားပါနော် ✌️Boy & Girl✌️သုံးလို့ရတယ် သူရဲ့ အဓိကအားသာချက်တွေက👇👇 🍎🍎မျက်နှာလေးကို အစိုဓာတ်ဖြည့်တင်းပေးတယ် 🍒🍒လိမ်းလိုက်ရင်စေးကပ်မှုမရှိပဲ မျက်နှာလေး Glow စေတယ် 🍊🍑အရေးအကြောင်းတွေကို သက်သာစေတယ် 🍓🍓တင်းတိပ် အမဲစက် ၀က်ခြံတွေကိုလျော့ပါးစေတယ် 🍋🍋အသားအရေကို တင်းရင်းကြည်လင်စေပါတယ်နော် 💁Made_in_Korea ဖစ်ပီး Quality ကို 100% ‌ထောက်ခံပါတယ်နော်🔥💯 🎊နှစ်သစ်🎊မှာ ကိုယ့်ရဲ့အသားအရေကို New Skiin လေးနဲ့ Version မြှင့်လိုက်ပါ♥️🥳 New_Skiin 3500ks လက်ကားစျေး သီးသန့်ရှိပါတယ် 📱09454549089 fb.me/NewSkiinMyamar Mess m.me/NewSkiinMyamar
😍😍မမတော့တစ်ရက်တစ်လုံးပုံမှန်သောက်ပြီးနုပျိုနေပြီလို့😍😘😘 New Skiin Supplement ကို တစ်နေ့တစ်လုံး မှန်မှန်သုံး ‌လောကကြီးမှာ သင်သာအလှဆုံး . . . အစွမ်းထက် Antioxidant များစွာ ပါ၀င်တာ‌ကြောင့် အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကို အထိရောက်ဆုံး ကာကွယ်ပေးပါတယ်. #NewSkiin #SkinRebornSolution 09454549089
Ma Than Than Win
မျက်နှာမှာ တင်းတိပ်တွေ ရှိနေလို့လား စိတ်မပူနဲ့ snail wish သုံးကြည့် 🐌🐌 မှဲ့ခြောက်တွေ များလာလိုက်တာ လာပါ snail wish လေးသုံး 🐌🐌 ဝက်ခြံတွေ ဖြစ်ပြီး အမဲစက်တွေ ကျန်နေလို့ ရော့ snail wish လေး ✨✨🐌🐌 မျက်နှာလေးကို အနာအဆာကင်းကင်းနဲ့ လှပချင်တယ်ဆို snail wish လေးရှိနေမယ်နော် 🐌🐌 Prince29500ks 09887636526
🐌Snail Wish Whitening Cream🐌 ထဲမှာပါတဲ့ Collagen က သင့်အရေပြားကို ဘာတွေထူးခြားလာစေမှာလဲ။ Collagen ဆိုတာ သင့်အရေပြားတင်းရင်းမှုရှိအောင် ထောက်ကန်ပေးတဲ့ Protein တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အသက် ၂၅ နှစ်ကျော်လာတာနဲ့အမျှ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ Collagen ထုတ်လုပ်မှု လျော့ကျလာပြီး ပျက်စီးမှုကတော့ ပိုမိုလာပါတယ်။ Collagen လျော့ကျလာခြင်းက အရေပြား တင်းရင်းမှုကို လျော့ကျလာစေပြီး ဆိုးဝါးလာပါက အရေးအကြောင်းတွေ ဖြစ်ပေါ်လာစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် Collagen ကို ဖြည့်တင်းပေးခြင်းအားဖြင့် တင်းရင်းနုပျိုသော အရေပြားကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။ Snail Wish Whitening Cream ကဲ့သို့ Collagen ပါ၀င်တဲ့ Cream များလိမ်းပေးခြင်းအားဖြင့် သင့်အရေပြား အရေးအကြောင်းများအတွင်း Collagen စိမ့်၀င်ထောက်ကန်ပေးပြီး အရေပြားတင်းရင်းမှုကို ချက်ချင်းခံစားရစေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပုံမှန်အသုံးပြုသွားရင် တင်းရင်းနုပျိုတဲ့ ✨✨✨အရေပြားကို ရေရှည်ပိုင်ဆိုင်နိုင်စေမှာပါ။ Snail Wish Whitening Cream လေး လိမ်းနေသူတွေကတော့ စတင်နုပျိုနေကြပြီနော်။ နောက်ကျတဲ့ ခြေထောက် သစ္စာဖောက်မဖြစ်ရအောင် နီးစပ်ရာ အရောင်း Agent ဆီမှာ အခုပဲ မှာယူလိုက်ရအောင်။ #SnailWishWhiteningCream #TheBestQuality #VitaCollagen 09887636526
😍အမလားလိမ်းပြီးကတည်းက မလှမှာမပူတော့ဘူးနော်😘😘🙂 New Skiin ကို သုံးဖူးပြီလား စမ်းသုံးကြည့်ပါ လို့အကြံပေးချင်ပါတယ်ရှင့် အရမ်းကောင်းတဲ့ New Skin လေးမှာ Snail mucus အပြည့်ဝဆုံးအဟာရနှင့်အစိုဓာတ်ကိုဖြည့်တင်းပေးပါတယ် Vita Collagen အရေးအကြောင်းများကို သိသာစွာပျောက်ကင်းစေပါပြီးအသားအရေကိုတင်းရင်းစေပါတယ် Protein and Vitamin အရေပြားအသစ်ထွက်ပေါ်မှုကို အားပေးပြီးအိုမင်းပျက်စီးနေတဲ့အရေပြားဆဲလ် များကိုဖယ်ရှားပေးပါတယ် Antioxidants အရေပြားအိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးပြီး အမည်းကွက် အမည်းစက် မ်ား ဝက်ခြံအမာရွတ် များကိုလည်းဖယ်ရှားပေးပါတယ် မြန်မာ ကိုရီးယား ဗီယက်နမ် (3)နိုင်ငံFDA ရပြီးသား ပစ္စည်းမို့ စိတ်ချစွာလိမ်းလို့ရပြီနော် 5g-3500ks 50g-29500ks 😘Order to Cb😘 09887636526
👻👻👻မျက်နှာပေါ်မှာ ဘာပြဿနာတွေရှိရှိ🤗🤗 🐌🐌🐌Snail Wish တစ်ဘူးသာဆောင်ထားလိုက်ပါ 🐌🐌🐌 💐💐💐Snail Wish လေးကသင့်အရေပြားပြဿနာ အားလုံးကိုဖြေရှင်းပေးပါလိမ့်မယ်👍👍👍 50g . 29500 ks ❤️ လက်လီ လက်ကား မှာယူရန် 09454549089 Crd 09887636526
ပစ္စည်း လက်ထဲ မရခင်ကတည်းက Preorderနဲ့ ရောင်းကောင်းတဲ့ Reborn Solution လေး ခုချိန် Order ထပ်ရတော့ ဘယ်လို ကြွားရမလည်းပေါ့နော် ထုတ်ကုန်လေးက လည်း ကောင်းတယ် ကုမ္ပဏီက လည်း အာမခံချက် တာဝန်ယူမှု အပြည့်နဲ့မို့ Focus Beauty က မည်သည့် ထုတ်ကုန်မဆို ယုံကြည်စွာ ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ဗျ လိုအပ်ခဲ့ရင်တော့ ကွီးစိုင်း ဖုန်းက 09259344802ပါနော် CB 📮ကလည်း order တက်လို့ရပါတယ်လို့ #STR #Save_Zone_Online_Shop
RS တွေဆိုတော့ ဘာဖြစ်ဖြစ် couple Skincare ကအစ တူနှစ်ကိုယ်ယှဉ် သုံးချင်ပြီဆိုရင်တော့ 👉 Snail wish 🐌🐌 ယောက်ျားလေးမို့ အပြင်ထွက်ရင် makeup မလိမ်းချင်ဘူး😐😐 မျက်နှာကလည်း ပင်ကိုယ်ညိုတယ်😒😒 မိန်းကလေးဆိုပေမဲ့ skincare လုပ်ရမှာပျင်းလို့ တစ်မျိုးတည်းနဲ့ တစ်ချက်ခုတ် လေးငါးချက်ပြတ်ချင်တယ် နှစ်ယောက်လုံးအတွက် သင့်တော်စေမယ့် ပစ္စည်း လေးကတော့ 👇👇 #Snailwish50g -29500ks 4လကြာ အသုံးခံပြီးတော့ ပင်ကိုယ်အသားအရေထက် lev 1 ဆင့်ပိုဖွေးစေမယ် ✅💯 Skincare အနေနဲ့ရော makeup အနေနဲ့ရော သုံးလို့ရ 💜 ပျက်စီးနေတဲ့ ဆဲလ်သေတွေကို ဖယ်ရှားပေးပြီး မျက်နှာလေးကို ကြည်လင်ဝင်းပစေပါတယ် ✅ ပြာခြင်း ကွက်ခြင်းမရှိဘဲ 24 နာရီကြာ ဖြူဝင်းမှုကို ထိန်းသိမ်းပေးပါတယ် 💯 Crd 09454549089
Ma Poe Ei Phyu
တစ္ခုတည္းနဲ႔ ၿပီးျပည့္စံုတဲ့ အလွက snail wish ရိွမွ ျဖစ္မွာေနာ္
First Page « 45 46 47 » Last Page